SOOMAALIDA SOUTH AFRIKA: “CIDNA UMA MAQNA CEELNA UMA QODNA”
1998dii ayaan waxaan aad ula dhacay maqaal aanan hada xasuusan wargayskii lagu soo daabacay oo nin xikmad badan ku soo qoray majalad uu kaga hadlaayay dhibaatooyinka ay soomaalidu ka dhaxleen burburkii iyo nidaam la’aantii ay sababeen dagaaladii sokeeye. Qoraaga oo xuuraansaday qaababkii nolosha ee ay ku sugneeyd bulshada soomaaliyeed iyo sida aysan u muuqan tiigsashada asbaabihii looga bixi lahaa ayaa wuxuu ku halqabsaday “cidna uma maqna, ceelna uma qodna”. Damcan tii Rabi waa gooni, laakiin qoraalkiisu wuxuu ka tarjumayay sida dadku aysan u hayn dhabe ay kaga bixi karaan masiibada ku habsatay.
Port Elizabeth | Sawirka: Google search
Iminka oo marxaladihii dhulkeenii hooyo wax badan iska badaleen ayaa waxaa la oran karaa oraahdaas waxaa badashay “Allaa u maqanaayoo sahan uma baahnayn”
Laakiin “cidna uma maqna ceelna uma qodna” waxaa i xasuusinaya marxalada murugsan ee shacabka Soomaaliyeed ku haysta wadankaan Koonfur Afrika.
Soomaalida ku nool wadankaan Koonfur Afrika waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 15,000, kuwaasoo inta ugu badan ay ku nool yihiin magaalooyinka ugu waawayn sida Johannesburg, Cape Town, Port Elizabeth iyo Durban.
Soomaalida oo wadankaan ku jooga qaxooti ahaan waxaa raacyadoodii ugu horeeyay soo galeen 1991dii, inkastoo wixii ka biloowday 1993dii ay marba marka ka danbaysa ay isa soo tarayeen Soomaalida wadankaan ku soo qulquleeysay.
Sharciga qaxootiga la siiyo oo ah marka ugu horeeysa ilaa iyo lixbilood oo ku meel gaar ah, ayaa ah carqabada ugu horeeysa ee qofka qaxootiga wadankaan ah la kulmo. Sharcigaan oo loo yaqaano “temporary permit to prohibited persons” macnihiisuna yahay “fasax-joogitaan ku meel gaar ah ee dadka (soo galooti) la xarimay” ayaa saamaxa joogista wadanka inta laga baarayo qofka qaxootiga sheegtay inuu xaq u leeyahay aqoonsiga qaxootinimo iyo in kale. Hadii uu qofku ku guuleeysto baaritaankiisa quseeya sheegashadiisa qaxootinimo, waxaa la siiyaa sharci labadii sanaba mar la cusbooneeysiiyo oo loo yaqaan “Refugee Status”, kaasoo ka dhigan in qofka loo aqoonsaday qaxootinimo islamarkaasna uu wadanka ku joogi karo qaxootinimo fasaxna uu u haysto inuu shaqaysto ama wax ka barto. Marka laga reebo joogitaanka wadanka, labadaan sharci waa kuwo ay aad u adagtahay inaad ku heshid xuquuqda ay leeyihiin sharciyada kale ee wadanka, waana fursad aad u adag in shaqo la isaga siiyo goobaha shaqooyinka. Waxaana xusid mudan in aan badanaa si toos ah loo qaadan ee musuqmaasuq, laaluush iyo dib udhacyo ay ragaadiyaan goobaha lagu bixiyo sharciyadaan.
GANACSIGA IYO SOOMAALIDA
Maadaama aad sharciyan ku shaqaysan karto labadaan waqradood ayay soomaalidu waxay dan bidaa inay furtaan ganacsiyo yar yar oo ay ku soo saartaan nolol maalmeedkooda. Qaar badan oo ka mid ahaa ganacsiyadaan yaryar ee ay soomaalidu furteen ayaa u najaxay tijaarooyin wax soo saar leh kuwaasoo suurta galiya ineey qaxooti soomaaliyeed oo shaqo laa’aan la silicsanaa ay shaqooyin ka sii helaan walaalahooda wax u tooseen. Hadaba Soomaalida oo is gacan qabata ayaa waxay ku soo shaac baxeen dad ganacsiga xirfad wanaagsan ku leh oo horumar ka sameeya. Waxaa si deg deg ah u balaartay ganacsigii qaxootiga soomaalida ee wadankaan, taasoo keentay inay galaan dhulal lama galaan hore u ahaa wadankan, Luuqada oo inta badan ku yarna kama aysan horjoogsan horumarka ganacsiga ay ka samaynayaan. Tani waxay sababtay ineey u nuglaadaan oo ay bartilmaameed u noqdaan burcada iyo ganacsato wadani ah oo ka hinaasay horumarka muuqda ee ganacsatada Soomaaliyeed ku tilaabsadeen. Waxaa arinta sii murjiyay sida inta badan ay Soomaalidu ka cabato booliiska wadanka oo aan waxba ka qaban dacwooyinka Soomaalidu gudbiso iyo dilalka iyo boobka wuxushnimada ah ee loo geeysto had iyo gooraale.
Falalkaan bani aadinimada ka baxsan ee lagula kacay ganacsatadaan soomaaliyeed ayaa waxay kasii dartay dhowrkii bilood ee ugu danbeeyay. Sawaxan xagga saxaafada ah oo isqabsaday kadib ayaad waxaad moodaa in dilalka oo badanaa maalin walba dhici jiray ineey u yarahakadeen asbuucle,kadib markii ay ceeb ku noqotay dowlada ayna culays saareen booliiska, inkastoo wax muuqda oo laga qabtay aysan ilaa iyo hada jirin.
Arinta fajicisada ah ee ugu wayn ayaa waxay tahay kala daadsanaanta haysata dadka Soomaaliyeed. Waxaad arkaysaa sida caadiga u ah marka qof la dilo oo inta laxabaalo meesha looga dhaqaaqo iyadoo aysan labo danbe ka wada hadlin. Arintaan oo dhiira galin u noqotay danbiilayaasha ayaa waxay salka ku haysaa waaya aragnimo la’aan Soomaalida ka haysata sharciga iyo qaabka wadanka ay ku noolyihiin, ayadoona ay u dheertahay nololmaalmeedka oo ay aad ugu mashquulsanyihiin, taasoo u fududeeysay dadka cadawga ku ah ineey sii dar dar galiyeen falalka ay wax ugu dhimayaan.
AHMIYADA ISKU DUUBNAANTA
Hadii Soomaalidu si isku duubni leh u wajihi lahaayeen falalkaan ka dhanka ah waxaa suurta gali lahayd in cadaalada la hor keeno dambiilayaasha ka danbeeya, taasoo cashar u noqon lahayd kuwa danbe ee u bareeri lahaa fal kan la mid ah ineey ka waantoobaan.
Waxaa wax laga argagaxo ah in dhacdooyinkii ugu danbeeyay qaar ka mid ah, qaasatan magaalada Cape Town, uu booliiska wadanku ku been abuurto in falalkaan ay ka danbeeyaan soomaalida dhexdeeda, taasoo ay aad uga caroodeen dadkii dhibanayaasha ahaa oo inta dil iyo dhac loo geeystay misana eedii ayaga la saaray.
Su’aasha meesha ku jirta ayaa ah inkastoo falalka caynkaan ah lagula kacay Soomalida wadankaan ku nool, maxaa sababay ineeysan meelna uga socon, bal noqosho iskaba dhaafe maalin walba kuwo dheeraad ah ay ku soo qulqulayaan. Jawaabta su’aashaan labo arimood ayay noqon kartaa. Waa tan horee dadku meel ay ku badashaan ma arkaan ayagoo awoodoodii isugu geeyay meheradaha ay ka mushaaxayaan.Tan labaadna, inkastoo dilalku jiraan oo amaanku uusan wanaagsanayn misana waxaa wadankaan aad ugu badan fursadaha ganacsiga iyadoo badanaa goobaha amaankoodu wanaagsanyahay aysan dhibka la qabin goobaha kale. Arinta carabka lagu dhufan karo in Soomaalidu wadankaan ka faa’iday ayaa ah ayagoo ku shaqo bartay oo laga yaabo in shaqsigu har iyo hoyaad uu uga tago sidii uu tijaaradiisa uga mira dhalin lahaa maadaama qofkii wadankaan seeg seeg ku noqda uu bada ka cabayo. Runtii waa wax lagu faani karo in aad arkaysid dadka soomaaliyeed oo 80% howlkariin ku soo baxay wadankaan, inkastoo ay aad uga gaabiyeen xaga aqoonta.
MAXAA LA GUDBOON?
Guntii iyo gaba gabadii maxaa talo ah oo ay u baahanyihiin Soomaalida Koonfur Afrika?
Soomaalidu waxa ay ka qayb qaateen xorayntii dadka reer Koonfur Afrika sida uu sannadkii 1962 xusay Nelsan Mandela oo ma hadlayey kulan lagu qabtay magaalada Addis-Ababa (1962). Akhri....
Ugu horeeyn waxaa ay u baahanyihiin in ay dhacsadaan xuquuqdooda, taasoo hadii aysan yeelin aaneey cidna usoo dhicin doonin. Waxaa muhiim ah in ay ogaadaan xaqa ay ugu leeyihiin dowlada in ay wax muuqda ka qabato amaankooda, maadaama ay dowladu saxiixday axdiga qaxootiga (UNHCR), hadii ay dowladu aysan damaanad qaadi karin amniga qaxootiga, markaas waxaa xaq loogu leeyahay in la waydiisto UNHCR-TA in ay dadka dajiso wadamo kale oo ay ku amaan helayaan. Waxaa kale oo muhiim ah in dadka la laayay eheladooda aysan inta ay duugtaan aysan iska libdhin ee waa inay keesaskooda furtaan xaqa ay leeyihiina aysan ka harin. Waxaa jira meelo laga caawin karo oo xagga sharciga iyo wixii kale ee xaquuqdooda ah. Laakiin waxaa ay xaquuqdooda dhacsan karaan marka ay iku duubanaan laga helo (class action). Kuwa u dhaqdhaqaaqa jaaliyadaha Soomaalida ayaa gaabiska ugu wayn ka jiraa, laakiin hadii isku duubnaan aysan jirin gudiyada community-iga wax saas u sii buuran ma keeni karaan.
Waxaan qoraalkayga ku soo koobayaa in dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa kunool Koonfur Afrika iyo guud ahaan qurubaha in ay hurdada ka kacaan oo wax isla qabsadaan si ay uga baxaan dhibaatooyinka aduunyada daafaheeda ku haysta.
Talo iyo tusaalayn iyo wixii aad macluumaad haysid oo ku saabsan Soomaalida Koonfur Afrika, fadlan kusoo hagaaji: hustanic@gmail.com
Soomaalida lagu laayey Qurbaha:: Ka akhri halkan